Ma khilaaf aya ka dhex aloosan xisbiga talada haya ee Kenya? - BBC News Somali
Madaxweynaha Kenya oo magacaabay xil cusub oo dhaliyay xiisad siyaasadeed
Ma dhab baa in Kenyatta uu ku jeesjeesay ku xigeenkiisa?
Heshiiskii Uhuru iyo Raila ayaa keenay xasilooni siyaasadeed
Lacagta la sheegay in la lunsaday ayaa oo gaareysa 210 milyan oo doolar ayuu madaxweyne ku xigeenka Kenya sheegay in aysan gaareyn intaasi oo ay dhan tahay 70 milyan oo doolar, hasa yeeshee wasiirka maaliyadda ee Kenya ayaa arrintaas beeniyay, isagoona sheegay in lacagta maqan ay intaas ka badan tahay. Raila ayaa isna su'aal geliyay sida madaxweyne ku xigeenka uu ku ogaaday tirade lacagta maqan.
"Dib u heshisiintii Raila iyo Uhuru ma ahayn mid daacad laga yahay oo waa fadeexad, madaama Raila uu doonayo in uu la heshiiyo madaxweynaha dalka, doonayana in uu collaadiyo ku xigeenkiisa".Sidaas waxaa horay u yiri Murkomen oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda ee aqalka sare ee Kenya.
"Dad badan oo reer kenya waxay qabaan in geeska la geliyay madaxweyne ku xigeenka iyo dadka taageera marka la eego dhacdooyinkii dhacay oo lagu bartilmamaeedsaday dadka isaga aadka ugu dhaw, waxayna saameyn ku yeelan kartaa wadashaqeyntii labad dhinac, taas oo caqabad horleh ku keeni karta dowladda". Sidaas waxa BBC-da ku yiri Maxamed Cabdullahi oo ka faalooda arimaha geeska Afrika.
Waxa jirtay in dad badan ay walaac ka qabeen xaaladda ka soo cusboonaatay xibsiga Jubilee iyo degenaansha la'anta ay ku keeni karto xasiloonida Kenya, arrintas oo Maxamed Cabdullahi uu sheegay inay adag tahay inay dhacdo, maadaama labada mas'uul ay horay u tageen maxkamadda dembiyada dagaalka ee ICC.
Xigashada Sawirka, Kenya today
Oscar Sudi iyo Murkomen waa siyaasiyiin aad ugu dhaw Ruto
Ruto oo isna arrintan ka hadlay ayaa sheegay in hay'daha dembi barista iyo xafiiska dacwad oogaha aanan looga bahneyn inay qabtaan shaqada guddiga la dagaalanka musumaasuqa.
"Waxaan rabaa in aa u sheego madaxa laanta dembi barista, George Kinoti in waxa aad sameneyso aysan ahayn musuq la dagaalan, balse aad dagaal kula jirta dad gaar ah oo aad tahay nin la soo diray, haddii aadan ka fiirsan waxan kuu sheegaya in wado xun aad ku socoto". Sidaas waxa horay u yiri Oscar Sudi oo ah xildhibaan aad ugu dhaw Ruto.